Ity no fomba ahafahanao mifandray amin'i Apple Support | Vaovao IPhone
Angel Gonzalez | | Apple products, Fampianarana sy torolàlana
Ny fahatongavan'ity vanim-potoana Krismasy ity dia hitondra mihoatra ny a paoma fitaovana mihoatra ny iray aminareo. Izany no antony mahatonga ireo mpampiasa vaovao maro hisalasala na hanana olana amin'ny vokatra vaovao. Hamahana azy ireo, Apple fanohanana manolotra loharanom-baovao marobe ary amin'ny ankamaroan'ny tranga dia misy consultation fohy afaka mamaha ny olanay. Amin'ity lahatsoratra ity dia hasehontsika anao ny fomba samihafa hifandraisana amin'ny serivisy teknika avy any Apple hamaha ny olana isan-karazany noho ny safidin'ny fifandraisana isan-karazany.
Fomba maro hifandraisana amin'ny fanohanan'ny Apple
Ny fanohanana ara-teknika dia iray amin'ireo tanjaky ny orinasa hatrany. Na amin'ny ambaratonga olombelona amin'ny magazay ara-batana na amin'ny ambaratonga vahaolana amin'ny Internet dia manandrana mamaha hatrany ny olan'ny mpampiasa ny manam-pahaizana Apple. Voalohany indrindra, manandrana mamerina mamerina ilay fitaovana, ary raha sanatria tsy mandeha izany dia miroso amin'ny fanamboarana feno kokoa. Na dia manana fomba fihetsika aza ny olana tsirairay, dia io matetika no modus operandi ny serivisy teknika.
Mba hifandraisana aminy Fanohanana an'i Apple miditra fotsiny amin'ny tranokala ofisialy noforonina ho an'ny fotoana. Raha vantany vao ao anaty dia tsy maintsy misafidy ny fitaovana misy antsika isika ary ny lafiny inona amin'ny terminal no miteraka olana amintsika: fifandraisana, Apple ID, fanamboarana ary fahasimbana ara-batana, sns Raha vantany vao voafantina ny 'lohahevitry ny ray aman-dreny' dia hanohy izahay mifidy subtopic izay mamintina na manazava hoe inona ny fangatahanay.
Arakaraka ny olana no omen'i Apple kely torolàlana sy torohevitra fototra hanandramana hamaha azy haingana . Na izany aza, raha nanao izay rehetra nolazain'ny fanohanana izahay fa tsy afa-po, dia hiditra amin'ny pejy farany miaraka amin'ireto safidy manaraka ireto:
Alefaso mba hanamboarana
Miresaka fanampiana ara-teknika
Miantso fanampiana avy eo
Miankina amin'ny toerana misy antsika, ny olana ary ny maha maika ny fanamboarana, dia hisafidy safidy iray na hafa isika. Raha misafidy ny hiresaka amin'ny serivisy teknika isika dia tsy maintsy omeo ny antsipiriany ary hiantso anay i Apple amin'ny alàlan'ny iray amin'ireo manam-pahaizana momba azy ireo. Raha misafidy ny hiteny amin'ny alàlan'ny resaka virtoaly isika dia tsy maintsy hanao toy izany koa ary ho eo alohan'ny resaka miresaka amin'ny mpiasa manandrana mamaha ny olana. Ny tolo-kevitro dia ny hiresaka amin'ny olona avy any Apple foana alohan'ny handefasana fitaovana hanamboarana raha tsy azontsika antoka ny zava-mitranga. Na izany aza, raha manana fivarotana ara-batana eo akaiky eo ianao dia io no safidy tsara indrindra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Ity no fomba ahafahanao mifandray amin'ny fanohanan'ny Apple
Misaotra indrindra; Ny olako dia izao; Manana Pad vaovao aho ary mbola tsy nahavita nanavao ny endriko, WhatsApp, sioka ... nijanona tsy nanampy ahy ny zanako lahy fa tonga Facebook vaovao hafa ary namoy ny namako sy ny fifandraisana amiko rehetra aho; Mandreraka ny fanombohana ary tsy atokisana. Manana ny zava-drehetra amin'ny telefaona 8 aho ary te hamindra izany any amin'ny Pad misaotra Blessings
Apple dia namoaka taratasy tamina diso tamin'ny fahatongavan'ny Apple Car ho 2021